Al-Shabaab oo miino ku qarxisay gawaari raashin mucaawino ah u siday Degmada Garbahaarey
Al-Shabaab oo miino ku qarxisay gawaari raashin mucaawino ah u siday
Mogadishu Talaado 3 April 2012 SMC
Wararka naga soo gaaraya degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo ayaa
sheegaya in mid ka mid ah gawaari kolonyo raashin mucaawino ah u siday
degmada Garbahaareey miino lagu qarxiyay, isla markaana gawaaridii
kale ee la socotay rasaas lagu furay.
Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ka
dambeysay weerarkaasi, kaddib markii ay ka war heleen in raashinkaasi
mucaawinada ah loo wado degmada Garbahaarey oo Dowladda KMG ah
maamusho, waxaana mucaawinadaasi iska lahaa Hay'adda ICRC.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarka maleeshiyada Shabaabka
ay u geysteen gawaaridaasi ay ku geeriyoodeen ilaa afar ruux, tiro
intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan goob joogayaal
ku sugan halka ay shaqaaqadu ka dhacday.
Dhinaca kale ilaa iyo iminka lama soo sheegin cid sheegatay inay ka
dambeysay weerarkaasi, mana jirto wax hadal ah oo hay'adda ICRC ka soo
saartay falka laga beegsaday raashinka gargaarka ah ee u siday dadka
ku dhibaateysan Garbahaarey.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay
boobeen qaar ka mid ah gawaaridii ka badbaaday qaraxa miino, iyagoona
qaatay wixii raashin ahaa ee saarnaa gawaaridaasi.